ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ အပ်လွယ်ကျေးရွာတွင် မီးနေသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ တပ်သားများမှ အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခြင်း - Progressive Voice Myanmar
About Progressive Voiceရှေ့ပြေးအသံအကြောင်း
Rule of Lawတရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး
Governance Reformsအုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
Sustainable Developmentရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Myanmar National Human Rights Commissionမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
PV in the Newsသတင်းများထဲမှ ရှေ့ပြေးအသံ
Mailing List Sign-upနောက်ဆုံးသတင်းအခြေအနေလက်ခံရယူရန်
Home Resources Statements ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြိ...
Statement 244 Views
ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ အပ်လွယ်ကျေးရွာတွင် မီးနေသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ တပ်သားများမှ အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခြင်း
November 17th, 2021 • Author: Women's League of Burma • 1 minute read
Progressive Voice isaparticipatory rights-based policy research and advocacy organization rooted in civil society, that maintains strong networks and relationships with grassroots organizations and community-based organizations throughout Myanmar. It acts asabridge to the international community and international policymakers by amplifying voices from the ground, and advocating forarights-based policy narrative.
Blog Posts - ဘလောဂ့်
Press Releases - သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
Statements - ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ
Reports - အစီရင်ခံစာများ
PV in the News - သတင်းများထဲမှ ရှေ့ပြေးအသံ
Contact us - ဆက်သွယ်ရန်
Newsletter Sign-Up - နောက်ဆုံးသတင်းအခြေအနေလက်ခံရယူရန်
Copyright © 2017 - 2022 PROGRESSIVE VOICE MYANMAR Website by BORDERMEDIA
Our Work – မိမိတို့၏အလုပ်
About – ရှေ့ပြေးအသံအကြောင်း
Rule of law – တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး
Governance Reforms – အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
Sustainable Development – ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Myanmar National Human Rights Commission – မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
Resources – မှီငြမ်းစရာများ
Weekly Highlights – ဘလောဂ့်
Press Releases – သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
Statements – ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ
Reports – အစီရင်ခံစာများ
Coup Updates – အာဏာသိမ်းမှုသတင်း
People’s Voices – လူထုအသံများ
PV in the News – သတင်းများထဲမှ ရှေ့ပြေးအသံ
Mailing List Sign-up – နောက်ဆုံးသတင်းအခြေအနေလက်ခံရယူရန်
Contact us – ဆက်သွယ်ရန်